Ny lantonoara mpijirika Cookbook - Lantonoara Of The Day
Ny lantonoara mpijirika Cookbook dia iray amin'ireo lehibe Clickfunnels fanatitra ao amin'ny tranonkala.
... Ary nisy lalana Russell Brunson manome ny fampidirana ny funnels izao tontolo izao.
Ilay boky dia manolotra dingana-by-dingana fanazavana hanorina funnels ny olona izay tsy mahafantatra ny fomba miasa. Koa manome anao iray tsy nisy fikarakarana ny funnels afaka manao raha tsy manana hevitra ny tokony hatao.
Ny boky koa dia miasa ho toy ny mpitari-dalana ho fiderana ny boky hafa rehetra natolotry ny orinasa.
Raha mihira ho amin'ny clickfunnels tranonkala, izany no tena mpitari-dalana izay hanampy anao hanao ny tsara indrindra avy amin'ny voaloham-fitsidihana sy ny fomba handamina ny toe-javatra fototra ho an'ny fandidiana.
Izao no ilainao hatao amin'izao fotoana izao mba hahazo ny dika mitovy: kitiho eto
Milaza ny maimaim-poana ny Cookbook, ka lazao thezm izay handefa azy (misy sambo kely saran'ny, fa matoky ahy…Tena tsara tarehy boky, ary tena mendrika ny manana ny dika ara-batana)
Ity boky ity dia tahaka ny 10 taona ny lantonoara-trano fahalalana, Kendreo rehetra voangona ho mora-to-hahatakatra ny fomba fanamboarana.